နယူးကာဆဲလ်နဲ့ ဆန်တီယာဂိုမူနက်ဇ်တို့အကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလာတဲ့ Goal! ရုပ်ရှင်မင်းသား – MySport Myanmar
နယူးကာဆဲလ်နဲ့ ဆန်တီယာဂိုမူနက်ဇ်တို့အကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောဆိုလာတဲ့ Goal! ရုပ်ရှင်မင်းသား
ဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Goal! မှာ အဓိကဇာတ်ကောင် ဆန်တီယာဂိုမူနက်ဇ်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကို ရုပ်ရှင်မင်းသား ကူနိုဘတ်ကာက Goal ဇာတ်ကားထဲက သူရဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ နာမည်လည်းတူ နိုင်ငံလည်းတူပြီး ဇာတ်ကားထဲမှာ သူရဲ့ဇာတ်ကောင် ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆဲလ်ယူနိုက်တက်အသင်းဆီကိုပါ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အပေါ် အံ့အားသင့်မိခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
Photo Credit : SPORTbilble
အသက်(၄၃)နှစ်အရွှယ်ရှိ မက္ကဆီကို ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနဲ့ မင်းသား ကူနိုဘတ်ကာဟာ ၂၀၀၅ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဘောလုံးအားကစား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ဘောလုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ ဆန်တီယာဂိုမူနက်ဇ်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်း တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ နယူးကာဆဲလ်မှာပါ ပါဝင်ကစားခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ငွေကြေးပိုင်းမှာတော့ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရပေမယ့် ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရှုုအားပေးသူတွေက ဇာတ်လမ်းပုံစံကို သဘောကျခဲ့တာကြောင့် ဇာတ်ကားကို နောက်ထပ်(၂)ပိုင်း ထပ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ကူနိုဘတ်ကာလည်း (၃)ကားလုံးမှာ ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ နူနိုဘတ်ကာရဲ့ Goal ဇာတ်ကောင်ရဲ့နာမည်နဲ့ တူညီနေတဲ့ အသက်(၁၉)နှစ်အရွှယ် မက္ကဆီကို လူငယ်တိုက်စစ်မှူးလေး ဆန်တီယာဂိုနူနက်ဇ်က နယူးကာဆဲလ်ကို တစ်ရာသီအငှားနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီလိုအိမ်မက်ဆန်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အပေါ် နူနိုဘတ်ကာက အထူးဝမ်းမြောက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ဘတ်ကာက “ကျွန်တော်အခုမှပဲ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အရာတွေက တကယ့်ဘဝမှာပါ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ နယူးကာဆဲလ်ဆိုတဲ့ ကလပ်အသင်းနဲ့ မြို့ကလည်း ကျွန်တော့်နှလုံးသားနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတာပါ။ ဆန်တီယာဂိုမူနက်ဇ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Goal ဇာတ်ကားထဲက စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကောင်နာမည်နဲ့ လုံးဝကို တူညီနေတယ်။ အခု ဒီကစားသမားက ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကျွန်တော် ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆဲလ်အသင်းဆီ လာရောက်ကစားတော့မယ်။ ဒါက အလွန်အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဒီကစားသမားလေးလည်း ဂိုးတွေအများကြီး သွင်းယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နယူးကာဆဲလ်ရော Goal ရုပ်ရှင်ရောက အိမ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်လာဖို့ လှုံဆော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အခု ဆန်တီကို ဂုဏ်ပြုစကားဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့က လူအများကြီးရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေက အမှန်တကယ် လှုံဆော်ပေးနိုင်မှာပါ” လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2021-09-03T11:57:38+06:30September 3rd, 2021|All Posts, Football, Premier League|